Nhau dzeBhaibheri: Nunurwo muEgipita Kusvikira Kuna Mambo Wokutanga waIsraeri - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Mosesi akatungamirira vaIsraeri kubva muutapwa muEgipita kuenda kuGomo reSinai, apo Mwari akavapa mitemo yake. Pashure, Mosesi akatuma varume 12 kundosora nyika yeKanani. Asi 10 vavo vakadzoka nomushumo wakashata. Vakaparira vanhu kuda kudzokera Egipita. Mwari akaranga vaIsraeri nokuda kweshaikwo yokutenda nokuvaita kuti vadzungaire makore 40 murenje.
Pakupedzisira, Joshua akasarudzwa kutungamirira vaIsraeri kupinda munyika yeKanani. Kuti agovabetsera kutora nyikayo, Jehovha akaparira manenji kuitika. Akaita kuti kuyerera kwoRwizi rweJoridhani kumire, masvingo eJeriko akoromoke, nezuva kuti rimire zuva rose. Pashure pamakore matanhatu, nyika yakatorwa kuna vaKanani.
Kuvamba naJoshua, Israeri akabatwa ushe kwamakore 356 navatongi. Tinodzidza nezvavazhinji vavo, kubatanidza naBharaki, Gidheoni, Jefta, Samsoni naSamueri. Tinoravawo nezvavakadzi vakadai saRakabhi, Dhebhora, Jaeri, Rute, Naome naDherira. Ose, chikamu CHECHITATU chinofukidza makore 396 enhau.